Fanakonam-bolana nanome aingam-panahy ireo bilaogeran-dahatsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jona 2018 18:31 GMT
(Marihina fa tamin'ny 8 Martsa 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nampiseho fanakonam-bolana tanteraka ny lahatsary avy amin'ny firenena samihafa, raha toa ka sendra tsy nahita izany ianao na raha mbola mahatsiarotsiaro indray ilay fotoana. Niseho ny 20 Febroary ilay hany fanakonam-bolana hitantsika ny taona 2008, sady ilay farany mandra-pahatonga ny 21 Desambra 2010 .
Mitranga ny fanakonam-bolana rehefa mandalo ny aloky ny Tany ny volana fenomanana, ary midika ny fanakonam-bolana tanteraka fa mandalo ny ampahany maizina indrindra amin'ny aloka ny volana, fantatra amin'ny hoe umbra. Araka ny filazan'ny NASA , ny “fanakonam-bolana” izay naharitra 3 ora sy 26 minitra dia hita “avy any Amerika Atsimo sy ny ankamaroan'ny Amerika Avaratra (20 febroary) ary any Eoropa Andrefana, Afrika ary Azia andrefana (21 Febroary) ihany koa.”
Mampiseho antsika ny endrika maro samihafa nakana sary ny fanakonam-bolana ny fitsidihana tao amin'ny YouTube:
Avy any Belize, nandefa ity lahatsary manaraka ity miaraka amin'ny mozikan'ilay mpitsoaka fliota Pablo Collado ilay mpisera bassimpact :
Avy any Arzantina, nandefa ity lahatsary ity miaraka amin'ny dikantsoratra, manazava ny dingana sy ny sary avy ao amin'ny varavarankeliny ilay mpisera KrrAinagotable , ary nanampy sombin-dahatsary nalaina tao amin'ny fahitalavitra tany amin'ny faritra samihafa tany Arzantina ihany koa izy.
Avy any Capetown any Afrika Atsimo, manana lahatsary amin'ny antsipiriany izay mampiseho ny fanakonam-bolana araka ny hita tany an-toerana i Finn Gregory .
Avy any Meksika, nandefa lahatsary iray izay ahitana ny tabataba an-dàlambe miaraka amin'ny sarin'ny volana nanjavona tsimoramora ilay mpisera holatabasco.
Ary hamintinana azy, nandefa ity lahatsary farany ity miaraka amin'ireo sary avy any amin'ny toerana samihafa manerana izao tontolo izao, anisan'izany i Etazonia, Kanada, Repoblika Tseky, Brezila ary Alemaina ilay mpisera pookeo1 .
Sarin'ny Takonam-bolana tany Amerika Atsimo nalain'i henriquetyds